ကန်ဇွန်းဥရွက်အစိမ်းသုပ် ~ စန္ဒကူး
တို့လည်း vegetable ဆိုအကုန်ကြိုက်တယ်။ မစားတဲ့အရွက်ဆို စာရွက်ဘဲရှိတယ် :)
ကူးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးကူးးးးးးစ်
ကူးကူးစ်က ဘာလည်းဟင်
သိချင်ပါ၏ ရု့လေးလေ စပ်စုလားဟင် ကူကူစ်
R U Muslim? Sorry if I am too curious :-))
ံမြူးစ် ကူးအဘိုးလဲ ဂေါ်ရခါးဘဲ.. Nepalese ..
@ Anonymous.. I'm not Muslim. I'm an "Adventist"
စုဘူးရေ.. ပြောတတ်တယ်.. :)
အခုတော့ အရွက်မရသေးလို့ ရန်ကုန်ရောက်မှ
ကန်စွန်းဥကို မမလုတို့ မော်လမြိုင်ဘက်မှာလည်း သုပ်စားကြတယ်။ ကန်စွန်းဥကို ချင်းလိုခြစ်၊ ပြီးတော့ ရှောက်ရည်နဲ့ စိမ်ပြီး ချင်းလိုပဲ နှပ်လိုက်တာ။ ပြီးတော့မှ ချင်းသုပ်လို သုပ်စားကြတာပေါ့နော်။ အခု ကူးကူးရဲ့နည်းလေးလည်း စားကောင်းမယ့်ပုံလေး။ မမလုလည်း စုဗူးလိုပဲ မစားတဲ့အရွက်က စာရွက်ပဲ ရှိတယ်။ ကောင်းတယ်နော်။ ကျေးဇူးပါ ညီမလေးရေ။
စေတနာ့ဝန်ထမ်း ချစ်အုန်းဖေ said...
this is about sweet potato leaves, not about sweet potato....
that leaves is tender than kang kong (water cress)
Well the main point being eating raw vegetables is not always good for your health.